I-Sadtu neCosas baya enkantolo ngoluka-matric - Ilanga News
Home Izindaba I-Sadtu neCosas baya enkantolo ngoluka-matric
I-Sadtu neCosas baya enkantolo ngoluka-matric
UMnyango wezeMfundo eyisiSekelo uthi kawuguquki esinqumeni sawo
UNgqongqoshe wezeMfundo eyisisekelo uNkk Angie Motshekga.
UFUNGA uyagomela uMnyango wezeMfundo eyisiSekelo obhokelwa yizinhlaka ezahlukene ziwusabisa ngenkantolo mayelana nesinqumo sawo sokuthi abafundi bakamatikuletsheni kuzomele bawaphinde amaphepha aputshukile, okungeleMathematics (paper 2) nelePhysical Science (paper 2), uthi mazilime ziye etsheni, ziyobhajwa khona.
Umnyango usongelwa yiSadtu echaze isinqumo sawo njengesingaphusile, kwazise uphenyo luthi bangaphansi kuka-200 abafundi okungenzeka ukuba bayitholile “imbuzi” uma kuqhathaniswa nabawu-390 000 okufanele babhale kabusha.
Ithe namuhla ngoMsombuluko inikela enkantolo ukuyovimba umnyango. UNobhala-jikelele we-Sadtu, uMnu Mugwene Maluleke, uthe lesi senzo somnyango siyinhlamba emsebenzini wothisha nabafundi abesebenze ngaphansi kwezimo ezinzima ngenxa yeCovid-19.
“Abafundi bafela ubala lapha kwazise bayimbijana abalibonile iphepha ngaphambi kokuba libhalwe,” kusho yena.
Ngaphandle kweSadtu, nenhlangano yabafundi iCosas, ibhodla umlilo ngalesi sinqumo, nayo ithi iya enkantolo. Igqugquzela abafundi ukuba bangazikhathazi ngokubuyela emadeskini ukuyobhala la maphepha amabili.
Okhulumela iCosas, uMnu Douglas Ngobeni, uthe bayasichitha isinqumo sikangqongqoshe. “Umnyango ushaye udaka ngokuthi ungaqali uxhumane nezinhlaka zezemfundo ezithintekayo kulolu daba ngaphambi kokuthatha isinqumo,” kusho yena.
UNkk Angie Motshekga ongungqongqoshe walo mnyango, uthe ukungaqalwa phansi kwala maphepha kuzokwehlisa izinga lokwethembeka kwemiphumela yabafundi abaphothule umatikuletsheni kulo nyaka. Uthi iMaths izophindwa mhla ka-15 kuyona le nyanga ngehora lesibili ntambama kuthi iScience ibhalwe mhla ka-17.
“Akubanga yisinqumo esilula ukusithatha, kodwa bekufanele sibhekisise isimo. Akuzona zonke izifundazwe ezithole imbuzi, kodwa uma sekukhona abafundi ababhale iphepha lingakaphumi ekubeni abanye kungenzekanga kubona lokho, sekuyobe kusho ukuthi kukhona abaphase kungafanele. Umatikuletsheni ubaluleke kakhulu kuleli zwe, kumele izinga lawo lihlale livikelwe,” kusho uNkk Motshekga.
Uthe akusona isimo esilula lesi kodwa abafundi kumele bamukele ukuqala phansi. Uveze nokuthi lesi sinqumo sithathwe emuva kokuvumelana nezinyunyana zothisha nomkhandlu obheka ubunjalo bezinga likamatikuletsheni (uMalusi).
Izolo ngeSonto, umnyango ngomlomo womkhulumeli wawo, uMnu Elijah Mhlanga, uthe ngeke uthuswe ngomebuzo wenyoka. “Lokhu abakwenzayo kuyilungelo labo uma befuna ukugculiseka, kodwa umnyango uzolinda udaba lungene enkantolo bese uyoziphendulela.
“Njengoba-ke amaphepha asenkantolo engakafiki, akucaci ukuthi bafuna ukuyothini enkantolo. Akukashintshi lutho-ke ngokuphindwa kwamaphepha, kusenjengoba ungqongqoshe ememezelile ngoLwesihlanu,” kusho uMnu Mhlanga.
Ukuputshuka kwamaphepha kuphenywa ngoKlebe njengoba kunezinsolo zokuthi neleBusiness Studies laputshuka. Izifundazwe okubikwa ukuthi abafundi bathola izimbuzi yiGauteng neLimpompo.
Sekuwumlando-ke ukuthi ngo-mhla ka-25 kuLwezi (November), oKlebe babopha uMnu Thema Shikwambana (31) – osebenzela inkampani eqashwe wumnyango ukushicilela amaphepha kamatikuletsheni – ngezinsolo zokupu-tshuza la maphepha. Wavela eNkantolo yeMantshi yaseGoli mhla ka-26, wathola ibheyili ngoMsombuluko odlule.
* Bheka ekhasini 10
Previous articleKube muncu ehlelwa yingozi eyoshada
Next articleUvuma ingcindezi umqeqeshi weBucs